Manchester City Oo Dooneysa Inay Frenkie De Jong Qeyb Kaga Dhigto Heshiiska Raheem Sterling Ee Barcelona
HomeWararka CiyaarahaManchester City oo dooneysa inay Frenkie de Jong qeyb kaga dhigto heshiiska Raheem Sterling ee Barcelona
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay xiiso u qabto heshiis isku bedelasho ah oo ay ku lug leeyihiin Raheem Sterling iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona Frenkie de Jong .
Waxaa la isla dhexmarayaa in Sterling, oo qandaraaskiisa ay ka harsan tahay wax ka yar laba sano, uu isku dayi doono inuu ka tago Etihad Stadium inta lagu guda jiro mid ka mid ah labada suuq ee soo socda.
26-sano jirkaan ayaa ku soo bilowday EFL Cup, taasoo la micno ah calaamad kale oo muujineysa in xiddiga heerka caalami ee dalka England uu hoos u dhacay heerka sare ee Pep Guardiola .
Xili Barcelona ay qiimeyneyso mustaqbalka ciyaaryahanka, El Nacional ayaa sheegeysa in City ay xiiseyneyso saxiixa De Jong.
Isagoo ka warqaba in Barcelona laga yaabo inaysan awoodin inay buuxiso qiimeyntooda Sterling, Guardiola ayaa lagu xamanayaa inuu soo bandhigay fikradda ah inay si toos ah isku dhaafsadaan xiddiga heerka caalami ee dalka Netherlands.
Inkastoo uu 13 kulan ku soo bilowday La Liga iyo Champions League xilli ciyaareedkan, De Jong ayaa ku guuldareystay inuu la kulmo wixii laga filayey tan iyo markii uu ka tagay Ajax kuna biiray Camp Nou 2019.